Imaski eprintiweyo ye-Covid-19 3d evunyiweyo-kuphela ngabashicileli be-MJF, iifayile ziyafumaneka - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaImaski eprintiweyo ye-Covid-19 3d evunyiweyo-kuphela ngabashicileli be-MJF, iifayile ziyafumaneka
Uyilelwe kwiDyunivesithi yaseCzech Technical ePrague, liZiko lakhe leLwazi, iRobhoti kunye neCybernetics (CIIRC CTU), eli candelo libizwa ngokuba yi'CIIRC RP95-3D 'kwaye kufuneka liprintwe kumshicileli' multjet fusion '(MJF).
Iifayile zemveliso zabaqhubi beeprinta zeMultiJet Fusion 3d zenziwe ukuba zifumaneke apha
Kwavavanywa ngokuthe ngqo ngabasebenzi besibhedlele saseNa Homolce. Ukuveliswa kwemaski kubashicileli abakhethekileyo be-3D kungaqala. Injongo yokuhambisa iziqwenga ezininzi kangangoko, ikakhulu ezibhedlela. Ngenxa yokuba ubuchwephesha be-MJF bufumaneka kuphela kwiindawo ezinqongopheleyo kwiRiphabhlikhi yaseCzech, abaphandi ngoku bajolise ekuphuhliseni uhlobo lokuphefumla olulungele imveliso yobuninzi ngotyando. Oku kuyonyusa umthamo wemveliso kwaye kwandise kakhulu uluhlu lweenkampani eziza kuba nakho ukubandakanyeka kwimveliso.
"Umsebenzi wethu olandelayo kwezi ntsuku zizayo kukugqibezela imodeli yokwenza imveliso," utshilo umphathi we-ofisi ye-CIIRC ye-CUIRC uVít Dočkal. “Sikholelwa ukuba ngale nguqulo intsha sinokuthi sifeze iziqwenga eziphantse zibe ngama-10,000 ngosuku.”
Phakathi kwegalelo kuyilo, iYunivesithi yaseNtshona Bohemia ePilsen ilungisa i-silicone exhalation valve kunye ne-Škoda Auto ishicilela ulingo lokuqala lokuqhuba kumgca wayo wokuvelisa.
Nokuba ngaphandle kokubumba ngenaliti, ukuvelisa kweli lizwe kulindeleke ukuba kufikelele kweziqwengana ezingama-500 ngosuku ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli, ngokutsho kwe-Czech Ministry yezempilo.
Olunye ulwazi lufumaneka apha
Enkosi kuTomas Zednicek, umongameli we-European Passive Components Institute ngokuzisa oku kuthathelwa ingqalelo yi-Elektroniki yeVeki nganye ukufumana ilizwi malunga neefayile zoyilo.